साना-साना कुरामा रिस उठ्छ ? यस्ता छन् नियन्त्रण गर्ने उपाय -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
आजभोलि मान्छेको दैनिकी निकै व्यस्त बन्दै गइरहेको छ । व्यस्त जीवनशैलीबीच तनावको मात्रा समेत बढ्दै गइरहेको छ ।
कामका कारण अहिले मान्छे तनावमा हुने गर्छन् । तनावमा भएको बेला झर्किने, स-साना कुरामा रिसाउने र चिड्चिडचपना देखाउने मानवीय स्वभाव हुन्छ । कहिलेकाहीं चिड्चिडापन तथा रिसले विकराल रुप लिन सक्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई विभिन्न कुरामा रिस उठिरहेको हुन्छ । बढी रिस उठ्दा स्वयं व्यक्तिलाई नै घाटा हुन्छ । रिसले उच्च रक्तचाप, मुटु सम्बन्धी रोग र डिप्रेसन समेत निम्त्याउन सक्छ । रिस उठ्दा हाम्रो शरीरमा भएको रगत तात्न थाल्छ । रगत तात्दा देखिन आउने प्रतिक्रियाले हाम्रो शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
यदि तपाईंलाई बढी नै रिस उठ्छ भने गहिरो सास लिने र योगा-ध्यान गरेर रिस नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।
किन उठ्छ अधिक रिस ?
हरेकलाई रिस उठ्छ । रिस उठ्नु मानव स्वभाव नै हो । तर रिस उठेको बेला कसरी बोल्ने, कसरी सम्झाउने वा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा मान्छेको व्यवहार र स्वभावमा भर पर्छ । कोही व्यक्ति कहिलेकाहीं दिक्क भएर आफन्त, परिवार तथा साथीभाइसँग रिसाउँछन्, फेरि सामान्य भइहाल्छन् ।
तर कोही भने रिस उठेपछि निकै आक्रामक हुन्छन् । उनीहरु रिस उठ्दा आसपास भएका सरसामान फाल्ने, फुटाउने र आफूलाई नै नोक्सान हुने काम गर्छन् ।
कोहीलाई रोए कराएपछि रिस शान्त हुन्छ भने कोहीलाई कुनै हर्कत नै गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं रिस उठ्नु सामान्य स्वभाविक भए पनि दैनिक र हरक्षण रिसाउनु रिस उठ्नु भने स्वभाविक होइन । विना कुनै कारण दैनिक रिस उठ्छ भने यसको समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
रिस नियन्त्रण गर्न किन जरुरी छ ?
आफ्नो रिस शान्त पार्न कसैलाई गालीगलौच गर्नु, लडाईं झगडा गर्नु, कुनै चिज वस्तु तोडफोड गर्नु वा मार्नु राम्रो होइन । अरुलाई कुनै हानि-नोक्सानी नपुर्‍याइ रिस शान्त पार्नु निकै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
रिसले आफूलाई त घाटा गर्छ नै । यसबाट अरुसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले रिसलाई शान्त पार्न र रिस उठेको बेला आफूलाई सम्हालेर तपाईं नैतिक र जिम्मेवार मान्छे बन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
यस्ता छन् रिस नियन्त्रण गर्ने उपाय
– शान्त रहने प्रयास गर्ने
– रिस शान्त नहुँदासम्म लामो सास लिइरहने
– आफूलाई सम्हाल्ने
– रुनु, कराउनुको बदला शान्त तरिकाले प्रस्तुत हुने प्रयास गर्ने
– आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने
– साथीलाई मनको कुरा भन्ने
– संगीत सुन्ने
– आफूलाई एक्लै छाड्ने
– मानसिक उल्झनबाट बाहिर आउने
रिसका कारण शारीरिक तथा मानसिक समस्याको संकेत अर्थात् महसुस भए चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ । उच्च रक्तचाप हुनु, मुटुको गति बढ्नु, शरीरका अंगहरु मजबुत हुनु, होश गुमाउनु, चिड्चिडापन आउनु तथा सामान्य भन्दा फरक व्यवहार देखिए आफूलाई सम्हाल्न तथा रिसलाई नियन्त्रण गर्न चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।